winRAR 3.71 — MYSTERY ZILLION
March 2008 edited March 2008 in File Request
WinRAR 3.71 ရဲ့ crack/ serial လေး လိုချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အခု Internet က download ဆွဲထားတာက 40 Days Trial ကြီး မို့လို့ပါ။
ကျေးဇူးပဲ ကို DBA ကြီးရေ ။
crack ကလည်း လွယ်လွယ် လေး။ click လေးနှိပ်လိုက်ရုံလေး။
WinRAR လိုပဲ အခြား အလကားရတဲ့ compression software တွေ အကြောင်းသိချင်ပါတယ်။
ALZip လား ကြားဖူးတာကတော့။
ကျွန်တော့်စက်မှာ vista တင်ထားတော့ zip ကို windows က zip ပဲ သုံးတယ်။ Winzip တောင် မတင်ဘူး။ အခုမှ MZ တို့ ၊ ML တို့မှာ တင်ထားတာတွေက .rar တွေ ဖြစ်နေတော့ ကိုယ်ပါလိုက်ပြီး WinRAR ကို တင်ရတာ။ အမှန်က .rar သာမဟုတ်ရင် windows buit-in compression tools ပဲသုံးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ zip အစား .rar ကို သုံးတာလဲခင်ဗျာ။ .rar က ပိုကျုံ့လို့လား ဟင်။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်က software ဆိုရင် Open Source တို့၊ အလကားရတာတို့ပဲ ပိုသုံးချင်တယ်။ အခု compression အတွက်ကကော ဘာ software တွေ OpenSource အနေနဲ့ ၊ အလကားရတာ အနေနဲ့ ရှိလဲခင်ဗျာ။ ALZip တို့၊7Zip တို့တော့ နဲနဲပါးပါး ကြားဖူးပါတယ်။ zip အပြင် .rar ပါရတဲ့ပါ ပေါ့နော်။
7zip - http://www.7-zip.org/ is best in opensource world
There isafull-feature command line version also. Its very useful, if you want to use in your own program
Unpacking:RAR, CAB, ISO, ARJ, LZH, CHM, MSI, WIM, Z, CPIO, RPM, DEB and NSIS
ကျေးဇူးပဲ ကို Mark :1:
ပစ္စည်း အသစ်ကလေးရောက်နေတယ်အစ်ကိုတို့ လာကြည့်ပါဦး
WinRAR_v4.1.65 ဆိုတာဘဲ :P
ဆွဲပြီးသွားပြီ ဗျို့ ။
3 ခု စလုံးပဲ။
1. WinRAR v 3.71
2. WinRAR v 3.71 Corporate Edition
3. WinRAR v 4.1.65
စိတ်မနိုင်လို့ ပွဲခင်းထဲတောင် တစ်ယောက်ထဲ မသွားဘူး ။ ဟီး :D
7zip ကတော့ ပိုကျုံပါတယ်.. ဒါပေမယ့် လူတိုင်း7zip မရှိဘူးလေ... Computer ပြင်တဲ့ ဆိုင်တွေကလည်း Winrar ပဲထည့်ပေးလိုက်တာကိုး... ဒါကြောင့် မြန်မာတော်တော်များများမှာ winrar ရှိပြီးသားပါ.. အဲ နိုင်ငံခြားက လူတွေလည်း winrar မရှိလို့ zip ဖြည်မရဘူးမထင်နဲ့နော်... 7zip ကို download ချပြီး သူနဲ့ ဖြည်လိုက်လည်း ရပါ့ဗျာ..